सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा बजार अनुगमन, म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बरामद - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा बजार अनुगमन, म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बरामद
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा बजार अनुगमन, म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बरामद
डी. आर. बन्जाडे बिहीबार, २०७६ कात्तिक ७ गते, १०:५० मा प्रकाशित
बुटवल–सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र रहेका किराना, खाद्यान्न, होटल तथा मिठाई पसलहरुमा अनुगमन गरेको छ । नगरपालिकाको अनुगमन समिति वडा नम्बर ५ र ६ मा रहेका खाद्य पसल तथा होटलहरुको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएका खाद्यवस्तु भेटिएपछि बरामद गरिएको अनुगमन समिति संयोजक एवं सामाजिक विकास शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
‘हामीले बढी ग्राहकको भीड लाग्ने खाद्यान्न र मिठाई पसलहरुलाई लक्षित गरेर अनुगमन गरेका थियौं । त्यस क्रममा अधिकांश पसलमा केही न केही त्रुटी पाइयो । केहीमा म्याद सकिएका वस्तु समेत भेटिए । सम्बन्धित व्यक्तिलाई सचेत समेत गराएका छौं’, सापकोटाले भने । अनुगमन समितिले खाद्यान्न पसल तथा होटलहरु गरेर १० वटामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये एउटामा बाहेक अरु सबैमा त्रुटी भेटिएको थियो । वडा नम्बर पाँचमा रहेको शुभलाम किराना स्टोर्समा सबैभन्दा बढी म्या सकिएका खाद्यवस्तु पाइएको थियो ।
शुभलाभमा घ्यू, गुल्कोज, चक्रतेल, विस्कुट, कल्फेक्स, बालबिटा, कन्प्लेक, फेन्टा, हर्बल, भोलालगायतका सामाग्री बरामद गरिएको छ । उक्त स्टोर्समा मात्रै २० हजार बढीको आखाद्यवस्तु बरामद गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । यस्तै, वडानम्बर ६ मा रहेको कृति किराना पसलबाट पनि हजारौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यवस्तु बरामद गरिएको छ । उक्त पसलबाट नमकिन, मस्र्यौरा, भुजी बरामद गरिएको हो । सोही वडामा रहेको विरेन जनरल स्टोरबाट फेसवास, बोडी लोसन लगायतका सामाग्री बरामद गरिएको छ ।
वडा नम्बर ६ मा रहेको चिया पसललाई सरसफाईमा ध्यान दिन, किचन सफासुग्गर राख्न सचेत गराइएको छ । सो पसलका संचालकलाई १५ दिनभित्र नगरपालिकामा उपस्थित हुन निर्देशन समेत गरिएको छ । यस्तै, बिशाल मिष्ठान भण्डारलाई किचनको सरसफाईम ध्यान दिन निर्देश्न दिइएको भण्डारीले बताइन् । नगरपालिकाले अब अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएकाले म्या सकिएका सामाग्री विक्रीवितरण नगर्न, मूल्य सूची प्रष्ट ग्राहकले देख्ने गरी राख्न, पसल नवीकरण गर्न, सरसफाई गर्न अनुरोध गरेको छ ।